1Credit စျေး - အွန်လိုင်း 1CR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို 1Credit (1CR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ 1Credit (1CR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ 1Credit ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ 1Credit တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
1Credit များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
1Credit1CR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$2.121Credit1CR သို့ ယူရိုEUR€1.791Credit1CR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.621Credit1CR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.921Credit1CR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr18.811Credit1CR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.13.311Credit1CR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč46.661Credit1CR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł7.861Credit1CR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2.81Credit1CR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2.951Credit1CR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$47.31Credit1CR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$16.391Credit1CR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$11.51Credit1CR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹158.31Credit1CR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.356.221Credit1CR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2.91Credit1CR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$3.221Credit1CR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿65.711Credit1CR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥14.691Credit1CR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥226.031Credit1CR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2505.51Credit1CR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦813.391Credit1CR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽155.391Credit1CR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴58.21
1Credit1CR သို့ BitcoinBTC0.000183 1Credit1CR သို့ EthereumETH0.00551 1Credit1CR သို့ LitecoinLTC0.0389 1Credit1CR သို့ DigitalCashDASH0.0233 1Credit1CR သို့ MoneroXMR0.0238 1Credit1CR သို့ NxtNXT165 1Credit1CR သို့ Ethereum ClassicETC0.312 1Credit1CR သို့ DogecoinDOGE610.45 1Credit1CR သို့ ZCashZEC0.0257 1Credit1CR သို့ BitsharesBTS65.16 1Credit1CR သို့ DigiByteDGB67.68 1Credit1CR သို့ RippleXRP7.51 1Credit1CR သို့ BitcoinDarkBTCD0.0729 1Credit1CR သို့ PeerCoinPPC7.02 1Credit1CR သို့ CraigsCoinCRAIG963.85 1Credit1CR သို့ BitstakeXBS90.21 1Credit1CR သို့ PayCoinXPY36.93 1Credit1CR သို့ ProsperCoinPRC265.42 1Credit1CR သို့ YbCoinYBC0.00114 1Credit1CR သို့ DarkKushDANK678.87 1Credit1CR သို့ GiveCoinGIVE4581.73 1Credit1CR သို့ KoboCoinKOBO481.94 1Credit1CR သို့ DarkTokenDT1.95 1Credit1CR သို့ CETUS CoinCETI6109.84